Tetikasa fanarenana roa sosona | Primature
Tetikasa fanarenana roa sosona
23 juin 2022 24 juin 2022 Aucun commentaire
Lapan’i Mahazoarivo, ny 23 Jona 2022 – Nanatrika ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ireo tetikasa mahakasika ny fanohanana ny seha-pamokarana indostrialy (ProAgro Youth Madagascar) sy ny tetikasa fanarenana ny lafiny ara-tsosialy sy ara-toekarenan’ireo mponina any amin’ny faritra niharan’ny rivodoza Anna sy Batsirai ny Praiministra Ntsay Christian.
Manampy betsaka ny ezaka efa nataon’ny governemanta tamin’ny fanarenana an’ireo fotodrafitrasa simba nandritra ny fandalovan’ny rivodoza, izay novatsian’ny kitapom-bolam-panjakana, ireto tetikasa ireto.
Nambarany fa mila hamafisina ny asa efa natao ny mpisehatra rehetra. Kendrena ao anatin’izany ny fampivoarana ny asa eny amin’ny tontolo ambanivohitra. Tanjona lehibe amin’izany ny hananan’ny faritra rehetra asa mendrika.
← Fanaovan-tsonia ny PPTD
Mahazoarivo, ny 27 jona 2022: Fifamindram-pitantanana teo amin’ny Talen’ny Arofenitry ny Praiminisitra, teo aloha, Andriamatoa Botokeky Fernand, sy ny Tale vaovao, Andriamatoa Raharijaona Mbolatahina. →
Fambolen-kazon’ny Primatiora 2022